PP vs. ပေ vs. PVC | ဘယ်ပစ္စည်းငါထုပ်ပိုးအသုံးပြုသင့်သလဲ 155 views
ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများ၏ # 2019 အလှကုန်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုး Trend 50 views
PVC vs ပေ: ပေ သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့် 13 အကြောင်းရင်းများကိုသင်ပြောပြပါ 10 views
rated 5.005ထဲက
ပလပ်စတစ် PP သေတ္တာ | polypropylene သေတ္တာပေးသွင်း & ထုတ်လုပ်သူ $ 0.05
Clear ကိုပလပ်စတစ်စတုဂံပုံး | Clear ကိုမျက်နှာသာသေတ္တာပေးသွင်း
အလှကုန်ကုန်ပစ္စည်းအဘို့ကိုရှင်းလင်းရန် PVC ပလတ်စတစ် Box ကို (လက္ကားစတုရန်းပလပ်စတစ်သေတ္တာ)
အလှကုန်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် OEM PP ပလပ်စတစ် Box ကို | တရုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပလပ်စတစ်ပုံးပေးသွင်း
အလှကုန်ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံး PVC သေတ္တာ | စျေးပေါ PVC ထုပ်ပိုးသေတ္တာ
Miffy အဘို့ရှင်းလင်းမည်ပေပလတ်စတစ်သေတ္တာ | ကလေးကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုး Box ကို
သောမတ်စ် & သူငယ်ချင်းများအတွက်ထိပ်တန်းပေပလတ်စတစ်သေတ္တာ (ပလပ်စတစ်အပေါ်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း)
wide-လည်ပင်းအဘို့အပွင့်လင်း box ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် | တရုတ်လုပ်ပလပ်စတစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေတ္တာများ
ကလေးထုတ်ကုန်များအတွက်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပေသေတ္တာ (CLOSEOUT Sales!)
OEM PVC ထုပ်ပိုး Box ကို | စတုရန်းဆုကြေးဇူးကိုထုပ်ပိုး box ကိုထုတ်လုပ်သူ
PVC သိုလှောင် Pack Box ကို | ရှင်းရှင်းလင်းလင်း PVC boxes တွေကိုတရုတ်
PP + PVC + ပေထုပ်ပိုးသေတ္တာ | ပလပ်စတစ်ပုံးစက်ရုံတွင်
OEM ကိုရှင်းလင်းရန် PVC Box ကို | အရည်အသွေးမြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေတ္တာ
100% Eco Friendly PVC ပလပ်စတစ်ပုံး (တရုတ် box ကိုပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူ)
(အနိမျ့စျေးနှုန်းနှင့်အတူ) နေထိုင်မှုထုတ်ကုန်များအတွက်စိတ်တိုင်းကျပေပလတ်စတစ် Box ကို
Abby က BUNNY များအတွက် High Quality ထုပ်ပိုးသေတ္တာ | PP ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူ
စျေးပေါပလပ်စတစ်ပွင့်လင်းထုပ်ပိုးသေတ္တာများ - PVC ထုပ်ပိုး box ကိုထုတ်လုပ်သူ
အဝတ်အစားပေ Box ကိုများအတွက် Clear ကိုပလတ်စတစ် Box ကို (တရုတ်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုး box ကိုထုတ်လုပ်သူ)
High Quality PET Packaging Box for tutu anna(Order now!)
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် PVC ပလတ်စတစ် Box ကို (ထုပ်ပိုးမှပုံနှိပ်မှ)
(Stock နမူနာ 1 တစ်ရက်အတွင်း) မွန်းပုံပြင်အဘို့အပေ PP ပေပလတ်စတစ်သေတ္တာ
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အားရှင်းလင်းရန်ပေ PP ပလတ်စတစ် Box ကို (နမူနာဘို့ 2-4 ရက်)
အီလက်ထရောနစ်များအတွက်စျေးပေါ PVC ပလတ်စတစ် Box ကို (အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်အဘို့ 11-15 ရက်) ထုပ်ပိုး
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် PVC ထုပ်ပိုး Box ကို (Pantone သို့မဟုတ် CMYK အတွက်မဆိုအရောင်)
စားနပ်ရိက္ခာများအတွက် Box ကိုထုတ်ပိုးကိုရှင်းလင်းရန် PVC / ပေ (ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသွားရောက်ကြိုဆိုကြ)
# 1 PVC + ပေနေထိုင်မှုထုတ်ကုန်များအတွက်သေတ္တာထုတ်ပိုး
(တရုတ်စက်ရုံထံမှ) နေထိုင်မှုထုတ်ကုန်များအတွက် Box ကိုထုပ်ပိုးလက်ကားပေပလတ်စတစ်
ရှင်သန်နေသောထုတ်ကုန်များအတွက်သေတ္တာထုတ်ပိုး PP + PVC + ပေ (အနိမျ့စျေး)
ရှင်သန်နေသောထုတ်ကုန်များအတွက် PVC ထုပ်ပိုး Box ကို (ဖောက်သည်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ် Accept)
ရှင်သန်နေသောထုတ်ကုန်များအတွက်စိတ်တိုင်းကျ PVC ထုပ်ပိုးသိုလှောင် Box ကို (PET + PP)
(ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်အတူ) နေထိုင်မှုထုတ်ကုန်များအတွက် LOW စျေး PP + PVC + ပေသေတ္တာ
ကုန်ပစ္စည်း Living များအတွက် # 1 ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးသေတ္တာ - PVC သေတ္တာစက်ရုံတွင်
ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုး box ကိုထုတ်လုပ်သူ | Clear ကို PP Box ကို
rated 4.505 ထဲက
PVC ပေ PP ကုန်ကြမ်း
Copyright 2019 © ALPPM ဘာသာစကားများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို & အခြေအနေများ